Fizarana ao amin'ny Mac avy amiko
Ny zavatra ho hitanao ao amin'ny I am from Mac dia fampahalalana marobe momba ny Mac, macOS, Apple Watch, AirPods, fivarotana Apple, vaovao mifandraika amin'ny orinasa Cupertino sy ny sisa. Mazava ho azy fa manatanteraka karazana fampianarana, torolàlana ary boky torolàlana ho an'ireo vao tonga teo amin'ny tontolon'ny Mac izahay, nividy Apple Watch na vokatra paoma hafa.
Azonao atao ny mahita ny asan'ny Apple smart watch na afaka mahita vaovao amin'ny vaovao rehetra ianao amin'ny serivisy an'ny orinasa Cupertino. Ny momba ny fananana fampahalalana betsaka araka izay azo atao momba an'i Apple sy ny Ekipa Mac aho mitandrina hitazona anao ho vaovao momba azy io, mba hahitanao ny zavatra rehetra ilainao amin'ny toerana iray.
OS X Liona
Fampiharana hafa ho an'ny Mac